Govt probe claims no human rights abuses in Rakhine
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး မအောင်မြင်သေးမှုအပေါ် မည်သူ့ကိုမှ လက်ညှိုးမထိုးလိုဟု အတိုင်ပင်ခံပြောကြား
သြဂုတ် ၇ ရက်နံနက်ပိုင်းက မိတ္ထီလာခရိုင်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့ မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာသို့သွားရောက်ကာ ရွာသူရွာသားများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပြုလုပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်းအတွင်း ၎င်းက ထိုသို့ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Is the NLD government acquiescing to the Tatmadaw?
Despite occasional tensions in its relationship with the Tatmadaw, the government is pressing ahead with its goals in the interests of the people and the nation.
Myanmar in early talks to buy electricity from China, says report
Monk protests demand resignation of government
How to fix Yangon's mobility crisis
While there is no quick fix to Yangon’s chronic traffic problems, dedicated bus lanes and incentives for cycling could help get people moving again.
How to fix Yangon’s mobility crisis
‘Green shoots’ emerging in real estate sector, says H1 review